Paul Pogba oo ku wargaliyay saaxiibadiis talaabada xigta uu qaadi doono – Gool FM
(England) 27 Juunyo 2019. Wargeyska “The Mirror” ayaa soo xigtay wararka ka imaanaya dhanka Talyaaniga ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Paul Pogba uu ku wargaliyay saaxiibadiis hore ee kooxda Juventus inuu doonayo dib ugu laabashada magaalada Turin xagaagan.
Paul Pogba ayaa dib ugu soo laabtay kooxda Manchester United xagaagii 2016-kii, kaddib markii uu kaga soo dhaqaaqay Juventus aduun dhan 89 milyan ginni, laakiin wuxuu shaki weyn ku abuuray mustaqbalkiisa horyaalka Premier League kaddib markii uu dhawaan sheegay inuu ku fikirayo tijaabinta loolan cusub.
Xiddiga reer France ayaa ku soo qaatay kooxda Juventus mudo 4 xili ciyaareed ah, tan iyo markii uu kaga dhaqaaqay Manchester United sanadkii 2012-kii, waxaana kooxda reer Talyaani ay dooneysaa inay markale dib ugu soo celiyaan Talyaaniga xagaagaan.
Wargeyska “The Mirror” ayaa sheegay in kooxda reer England ay diyaar u tahay inay iska fasaxdo Paul Pogba suuqan xagaaga hadii ay ku heleyso ugu yaraan 150 milyan ginni.
Yeelkadeeda, sida ay baahinayaan wararka ka imaanaya gudaha dalka Talyaaniga Pogba ayaa u sheegay saaxiibadiis hore inuu doonayay dib ugu soo laabashada magaalada Turino, xafladda dhalashada Andrea Barzagli ee bishii lasoo dhaafay.
Pogba ayaa dhaliyay 43 gool, 178 kulan mudada 4-tii xili ciyaareed uu ku soo qaatay kooxda Juventus, wuxuuna kula guuleystay 4 jeer ee ah horyaalka Serie A, iyo 2 jeer oo Coppa Italia ah.
Xulka qaranka Algeria oo guul ka gaaray Senegal kulan ka tirsan Koobka Qarammada Afrika 2019... + SAWIRRO
Maxaa ka jira in PSG ay qandaraas cusub u soo bandhigtay Adrien Rabiot?... Waxaa jawaab ka bixisay isaga hooyadiis